လမ်း 8: တင့်တယ်ဘဝက2(သတ္တုတွင်း) — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ငါမယုံကြည်နိုင်, မယုံကြည်နိုင်, သင်တို့ရှိသမျှသည်သတ္တုတွင်းင် (2X ကို)
သင်နှင့်သင့် mama y'all အကြှနျုပျ၏အကွိုကျဆုံးမိန်းကလေး
ဒါဟာအစဉ်အမြဲယူ, ယခုကျွန်တော်အိမ်ကသငျသညျဆောင်ခဲ့, သင်တို့ရှိသမျှသည်သတ္တုတွင်းင်
သင်တို့ရှိသမျှသည်အချိန်များ၏ cutest င်
Plus အားငါ y'all ကြီးထွားစောင့်ကြည့်ဖို့မစောင့်နိုင်သိ
သူတို့ကိုမှအလမ်းများတို့၌ dudes မရှိကတိသစ္စာပြုစကားကိုနားထောငျဖို့
သငျသညျအထံတျောပိုငျဆိုငျသူသည်ငါ့ရန်သင့်အားပေးတော်မူ (2X ကို)
Brandon • ဒီဇင်ဘာလ 9, 2014 တွင် 5:38 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
လှပသောဘဝ 1 တကယ်တော့ငါနှင့်ငါ့ရည်းစားကကူညီပေးခဲ့ (ထိုအချိန်ကယခုသူမကျွန်တော့်ဇနီးင်) ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးသမီးစောင့်ရှောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ. ငါအယ်လ်ဘမ်ဝယ်ပြီးလျှင်ငါမယ့်ဟစျကျွောလေ၏သီချင်းကြားလျှင်ငါသည်ဘုရားသခင်၏ငါ့ကိုရန်သင့်အားတဆင့်စကားပြောခဲ့ပါသည်သိလို့. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သင်တို့၏နားထောင်ခြင်းအသက်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ BRO. # keepthefight